लण्डन । बेलायतमा बसोबास गरिरहेका बेलायतका नागरिक बाहेकका गैर बेलायतीहरुको कुल संख्या कति होला ? यी गैर बेलायती विदेशीहरुमध्ये सबैभन्दा बढि कुन देशका नागरिक छन् होला ?
द अफिस फर नेसनल स्टाटिस्टिक्स (ओएनएस ) ले एक नयां तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार अहिले बेलायतमा बसोबास गरिरहेकाहरुको कुल संख्या ६ करोड ५१ लाख ७६ हजार छ । त्यसमध्ये ६२ लाख गैरबेलायती नागरिकहरु छन् ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा गैर बेलायतीहरुको यो संख्या ४ प्रतिशतले बृद्धि भएको हो ।
त्यसैगरी बेलायतबाहेकका अरु देशमा जन्मिएका तर अहिले बेलायतमै बसिरहेका मानिसहरुको संख्या ९४ लाख छ । जुन विगतको तुलनामा ३ प्रतिशतले बढेको छ ।
तथ्यांकका अनुसार ६२ लाख गैरबेलायती नागरिकहरुको ६१ प्रतिशत अर्थात ३८ लाख मानिसहरु विभिन्न युरोपेली देशका नागरिक हुन् ।
बेलायतमा बसोबास गर्ने गैरबेलायती नागरिकहरुमा सबैभन्दा बढि पोल्याण्डका नागरिक छन् । उनीहरुको संख्या झण्डै १० दश लाख छ ।
पोल्याण्डपछि दोस्रो स्थानमा रोमानियाका नागरिकहरु छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बृद्धि हुंदै उनीहरुको संख्या अहिले ४ लाख ११ हजार पुगेको छ ।
सूचीको तेस्रो स्थानमा रिपब्लिक अफ आयरल्याण्डका नागरिकहरु छन् । उनीहरुको संख्या ३ लाख ५० हजार छ । चौंथो स्थानमा भने भारतीयहरु छन् । ३ लाख ४६ हजार भारतीय नागरिकहरु अहिले बेलायतमा बसोबास गर्छन् ।
सन् २००४ बाट गणना सुरु गरिएयता बेलायतमा बस्ने बेलायतबाहिर जन्मिएका तथा गैरबेलायती नागरिकहरुको संख्या हरेक वर्ष बृद्धि हुंदै आएको छ ।